Vaovao - Inona avy ireo lesoka mahazatra sy fitsaboana amin'ny masinina manapaka laser?
Rehefa mampiasa a milina fanapahana laser, olana matetika mipoitra noho ny fotoana maharitra mitaky fampiasana, ny tontolon'ny vovoka ary ny kalitaon'ny mpandraharaha. Inona no tokony hataoko raha misy ny olana mahazatra?
Voalohany, tsy misy programa momba ny fanombohana ara-dalàna:
Fahombiazan'ny tsy fahombiazana: maty ny jiro famantarana ny herinaratra lehibe, maty ny jiro famantarana ny birao lehibe, tsy miseho ny takelaka, maty ny jiro famantarana ny mpamily motera, ary misy feo mikotroka avoaka ao amin'ilay masinina.
Ny antony mahatonga ny olana: Vahaolana | Fifandraisana ratsy amin'ny famatsiana herinaratra lehibe, simba ny herinaratra DC, tsy fahombiazan'ny tontonana fanaraha-maso, tsy fahombiazan'ny familiana maotera, tsy fahombiazan'ny milina. Afaka mamaha azy tsikelikely ilay mpandraharaha.
Fomba fanaraha-maso manokana:
1. Topazo maso ireo jiro famantarana amin'ny masinina, jereo ny toerana misy ny lesoka, ny jiro famantaran-jiro lehibe dia tsy mirehitra, zahao ny fifandraisana misy ny herinaratra dia ratsy na notifirina ny angovo famatsiana herinaratra, ny jiro lehibe LED dia tsy mamiratra na tsy miseho ny takelaka fanaraha-maso, azafady mba jereo ny DC 5V, ara-dalàna ve ny famoahana herinaratra 3.3V ary maty ny jiro famantarana ny mpamily? ? Hamarino raha ara-dalàna ny fivoahan'ny herinaratra. Rehefa manamarina raha ara-dalàna ny famatsiana herinaratra dia esory azafady ny tsipika famoahana herinaratra hijerena raha toa ka diso ny famatsian-jiro na ny famatsiana herinaratra.
2. Hamarino raha ara-dalàna daholo ny fampiratiana rehetra. Raha maheno hum mazava ianao dia mety tsy fahombiazan'ny mekanika izany. Hamarino raha atosika amin'ny tanana ny trolley sy ny andry. Malama, na misy ny sakana. Jereo raha misy zavatra hafa manakana azy.
3. Hamarino raha misaraka ny vatan'ny motera, na malalaka ny kodiarana fampifanarahana,
4. Hamarino raha mifandray tsara ny birao lehibe, ny famatsiana herinaratra, ny tariby na ny plugs mifandraika amin'ny tsindry ny lozisialy (fitaovana).
5. Hamarino raha tapaka ilay mpampitohy tariby avy eo amin'ny sisin'ny drive (drive) mankany amin'ny motera. Ny tariby 18-core avy amin'ny birao lehibe mankany amin'ny birao kely dia simba. Na hampidirina.
6. Hamarino raha marina ny fikirana ao anatiny. Ny masontsivana ankavia dia mitovy, fa raha tsy mitovy kosa dia tsy maintsy ahitsy sy soratana amin'ny masinina.
2. Tsy misy fampisehoana amin'ny tontonana, ary tsy azo alefa ny bokotra:
Trangan-javatra misedra olana: Ny antony mety lehibe indrindra dia ny tsy fisehoana amin'ny tontonana boot, ary tsy mandeha tsara na tsy mandeha tsara ny lakile.
Ny antony mahatonga ny olana: tsy ara-dalàna ny famatsiana herinaratra maoderina fanaraha-maso fampisehoana, ratsy ny fifandraisana amin'ny fanaraha-maso ary diso ny tontonana.
1. Atsangano indray ny masinina mba hijerena raha toa ka namboarina toy ny mahazatra ny andry sy ny trolley, ary tsy nisy ny fepetra noraisina, ary tsy nisy ny fepetra noraisina hiatrehana ny lesoka araka ny fanombohana.
2. Tsindrio ny bokotra famerenana herinaratra, ary tsindrio ny bokotra zana-tsipìka sy bokotra fiasa eo amin'ny tontonana masinina mba hahitana raha ara-dalàna izany, raha azo averina ho azy ireo lakile ireo raha misy tsy fetezana tsy ara-dalàna.
3. Hamarino raha malalaka sy tsy manohina ny socket sy ny mpampitohy amin'ilay mari-pamantarana.
4. Soloy ny sakana fanaraha-maso fampisehoana, zahao raha misy fampisehoana, raha mirehitra ny jiro famantarana ny sakana fanaraha-maso, raha ara-dalàna ny famatsiana herinaratra,
5. Soloy ny tariby data. Ny birao lehibe dia mamaritra hoe P5 no velona ary 5V ny voltage. Raha tsy ara-dalàna izany dia zahao azafady ny fivoahan'ny herinaratra 5V, raha tsy misy ny vokatra dia miova azafady amin'ny famatsiana herinaratra 5V.
6. Raha misy efijery fampirantiana fa tsy mandeha ny bokotra, azafady mba soloy ny sarimihetsika bokotra hahitana raha ara-dalàna izany.
7. Raha mbola tsy mandeha izy dia soloina fotsiny ilay motherboard hizaha toetra.